नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : ओलीज्यू, बालुवाटार तपाईँको पेवा हो ? - अर्जुन पोख्रेल
ओलीज्यू, बालुवाटार तपाईँको पेवा हो ? - अर्जुन पोख्रेल
मलाई थाहा छ, दुई पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता निकै उत्साहित भैसकेका छन् । धैर्य गरेर यो लेख पढ्ने आँट गरेनन् भने उनीहरुले मलाई यो त कम्युनिष्ट विरोधी रहेछ, यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्न पनि सक्छन् । सम्हालिएर ठिक पार्ने कुरा गरेनन् भनेपनि एमाले र माओवादीको एकता यसलाई मन परेको रहेनछ, कि यो कांग्रेस हो या राजावादी नै भन्न पनि उनीहरु पछि नपर्लान् । वाम पार्टीका केही कार्यकर्ता आफूभन्दा फरक विचार राख्नेप्रति र उनीहरुका गल्ती अनियमितता बाहिर ल्याउनेप्रति निकै उग्र हुन्छन् भन्ने कुरा
सामाजिक सञ्जालतिर पनि प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठ्याक्कै हिटलरको नाजी शासनकालमा प्रोपोगान्डा मन्त्री जोसेफ गोयबल्स जस्तै लाग्छ । काम गर्ने होइन तर गलत कुरा सय पल्ट दोहोर्‍यायो भने सत्य हुन्छ भन्ने गोयबल्सको कार्यशैली ओलीलाई पनि खुब मन पर्छ जस्तो छ । हरेक दिन ‘म भ्रष्टाचारविरोधी, म सुशासन कायम राख्ने प्रधानमन्त्री’ भन्दै चर्का स्वरमा भन्दै हिँड्नुहुुन्छ । बिचरा नागरिकलाई त लाग्दो हो, ‘वाह हाम्रा प्रधानमन्त्री त क्या सुशासनका प्रवद्र्धक र भ्रष्टाचारविरोधी रहेछन’ - Ujjyalo